Home Wararka Guddoomiye Ku xigeenka Baarlamaanka oo soo saaray warqad maxkamadeed kuna eedeeynayo MOL...
Guddoomiye Ku xigeenka Baarlamaanka oo soo saaray warqad maxkamadeed kuna eedeeynayo MOL (Akhriso)
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Baarlamaanka JFS aya soo saaray warqad maxkamadeed isagoo ku eedeynaya in warbaahinta Muqdisho Online ay ku xadgudubtay sharciga iyo xeerka saxaafadda.
Waxaa Muqdisho Online maamulkeeda soo gaartay warqad ka soo baxday xafiiska Guddoomiye ku xigeenka BJFS, taasoo sharciga hareer marsan. Guddoomiye ku Xigeenka Baarlamaanka waxay shaqadiisu tahay sharci dejin iyo la xisaabtanka xukumadda laakiin waxaa muuqata in uu isku badalay Guddoomiye maxkamadeed oo xukuma dadka iyo warbaahinta xorta ah.
Dastuurka isaga lagu dhaariyay loona dhaariyay in uu difaaco aya ay ku cadahay xuquuqda Saxaafadda xorta ah iyo doorka ay ku leedahay ilaalinta danaha dalka iyo dadka. Waxa hada xabsi ku jiro wariyayaal si sharci daro ah loo xiray. Sidoo kale waxa habeen iyo maalin dagaal lagu hayaa warbaahinta guud ahaan gaar ahaan kuwa ka howl-gala magaaladda Muqadishu.
Muqadisho Online marnaba uma joojinayso shaqada ay u hayso shacabka Soomaaliyeed handadaad kaga timaada hogaanka baarlamaanka. Muqadisho Online waxa ay ku shaqaysaa si waafaqsan sharuucda saxaafadda Soomaaliya iyo tan caalamiga.
Qoraalka hanjabaada ah ee ka soo baxay Xafiiska Guddoomiye ku Xigeenka aya ka danbeeysay ka dib markii labo habeen ka hor ay Muqdisho Online soo qortay warbixin iyo cadeeymo muujinaya lacag laalush ah oo uu Guddoomiye Cawad iyo RW Kheyre siiyeen qaar ka mida xidlhibanadda Baarlamaanka si loo fashiliyo kulanka baarlamaanka kula xisaabtamayay xukuumadda.
Muqadisho Online marnaba ma joojinayo in ay shacabka u soo gudbiso musaqa baahay ee ka jira dowladda dhexdeeda iyo dhaca iyo ku tagrifalka hantida umaadda Soomaaliyeed.
Qoraalka uu soo saaray Guddoomiye Ku Xigeenka Cawad waxa ay Muqadishu Online u aragtaa mid la doonayo in lagu xalaaleysto dhiiga shaqalaaha Muqadishu Online. Waxaan halkaan ku cadeynaynaa in Gudoomiye Cawad uu mas’uul ka yahay dhib kastaa ee ku yimaado wariyayaasha iyo shaqaalaha Warbaabinta Muqdisho Online.
Previous articleRW Kheyre oo ku bahdilay Muqadisho Ugaaska iyo odoyaasha dhaqanka ee Beesha Mariixaan?
Next articleXildh. Baarlamaanka oo ka hor yimid musuqa Gud. Mahad Cawad sheegayna in uu caqabad ku yahay kalfadhiyada Baarlamaanka (Video)
DF oo maanta Muqdisho tababar uga fureysa qaar ka mid ah...
Nin Al-shabaab ka tirsanaa oo lasoo qabtay